2010 June | MoeMaKa Burmese News & Media
>MoeMaKa Reader from Rangoon – Donor ? Fund Rasier? Volunteer himself ?
> အလှူရှင်လား၊ အလှူခံလား၊ စေတနာဝန်ထမ်း စွမ်းဆောင်သူ ကိုယ်တိုင်လား မိုးမခစာဖတ်သူတဦး (ရန်ကုန်) ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၀ မိုးမခစာတည်းများခင်ဗျား ရေးနေကျအတိုင်း စာရေးလိုက်ပါတယ်။ ပေးပို့တဲ့ အီးမေးသတင်းလွှာတွေကြောင့် ပြင်ပက အင်တာနက်ကမ္ဘာကြီးနဲ့...
>1 trishaw equal to2motor bikes
> ဆိုက်ကားတစ်စီး ညီမျှခြင်း ဆိုင်ကယ် နှစ်စီး ဝင်းမြတ်၊ ရန်ကုန်ဇွန် ၃၀၊ ၂ဝ၁ဝ ခရီးသည် စောင့်နေသော ဆိုက်ကားဆရာများ (photos: moemaka) ဆိုက်ကားတစ်စီး တန်ဖိုးဟာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ ညီမျှတယ်...
>Citizen of Burma Association to support charity drive for local volunteers’ group
> ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်မိတ်ဆွေများက လူထုမဲဆန္ဒ ခံယူသည့် ဆုချီးမြှင့်ရေးလုပ်ငန်းအပြင် ပြည်တွင်းသို့ ကူညီသည့် အလှူခံလုပ်ငန်းကိုပါ တိုးချဲ့မည်ဟု ပြောကြား မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၀၁ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာပြည်တွင်းရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်း...
>a joke made in burma
> ကမ္ဘာကျော်သည့် ဟာသဘီရုမာဇွန် ၃ဝ၊ ၂ဝ၁ဝ ကျောင်းခဏပိတ်၍ မြန်မာပြည် အလည်ပြန်လာစဉ်က ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံး ရှုံးထွက်ပွဲတွေ ကန်နေကြချိန် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာတီဗီတွေကလည်း တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပေးမယ်ဟု ကြေညာထားသော်လည်း ကြည့်ရဖို့က မကျိန်းသေဘူးဟု...
>Moe Cho Thin – The art of teaching
> စာသင်ခြင်း မိုးချိုသင်း ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၀ အခု ဒီမှာ နွေရာသီ ရောက်လာပြီဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း ပူ စ ပြုပြီပေါ့။ ပူတော့ နေလို့ ထိုင်လို့ မကောင်းဘူး။ လင်းတော့...
>Burma to take part in North Korea film festival
> မြန်မာရုပ်ရှင်များ မြောက်ကိုရီးယားသို့ သွားမည်people.com.cnဇွန် ၃ဝ၊ ၂ဝ၁ဝနာမည်ကျော် မြန်မာရုပ်ရှင်ကား၏ DVD ကာဘာ မြောက်ကိုရီးယားတွင် စက်တာဘာလအတွင်း ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည့် ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သို့ အရည်အသွေးကောင်းသည့် မြန်မာဇာတ်လမ်းတချို့ ပေးပို့မည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး...
>Aung Din – Let’s startanew game
> ကစားပွဲ အသစ် ဖန်တီးကြဖို့ အောင်ဒင်ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၀ အခုတလော ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်တချို့ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံတော့မဟုတ်၊ တဝက်တပျက်ပါ၊ ကြည့်ရင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေကို ဘောလုံးပွဲနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ပြီး ဟောဒီလို...
>27th June 2010 – MoeMaKa Radio
> ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၀ – မိုးမခရေဒီယို အထူးကဏ္ဍ ၁ – ပြည်လုံးကျွတ် ပထမဆုရ တေးများ – ၃ ပုဒ် အမေရိကန်နဲ့ မြန်မာရွေးကောက်ပွဲ နှိုင်းယှဉ်ချက် –...
> စည်းချက်လောအယ်စိုးဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၀ ကိစ္စတခုနဲ့ ကျွန်တော် အမေရိကန်နိုင်ငံရောက် ကရင်ဒုက္ခသည်တွေနေထိုင်သော ရပ်ကွက်ကိုရောက်သွားရင်း သူမကို စတင်မြင်ဖူးခဲ့တာပါ။ သိပ်သေချာတာကတော့ … သူမ ပြုံးသောအပြုံးက အရက်ပြုံး၊ အရက်သမားများနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ဖူးတော့...
>Nyan Oo Maung – Zion National Park, Utah
> ဇိုင်ယန်ဥယျာဉ် အပျိုစင်မြစ် ဉာဏ်ဦးမောင် ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာကျော် ဖျော်ဖြေရေးမြို့တော်၊ တစ်နည်းပြောရရင် လောင်းကစားမြို့တော် လပ်စ်ဗေးဂပ်စ်ကနေ ထွက်လာ တော့ မနက် ၉ နာရီခွဲ။ နွေလရဲ့ တောက်ပတဲ့နေရှိန်က...
>FFSS Yangon Charity Activity – Last Week of June 2010
> နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၏ သတင်းမှတ်စု – ဇွန်နောက်ဆုံးပတ် မိုးမခ (နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) မှတဆင့်) ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၀ သမိုင်းမော်ကွန်းဝင် သစ်ပင်ကြီးများ ယနေ့ ၂၈.၆.၂၀၁၀ (တနင်္လာ)နေ့တွင် MONSOON Nursery...
>Aung Way – Myint San Aung
> သားကြီး မြင့်ဆန်းအောင် အောင်ဝေးဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၀ မြင့်ဆန်းအောင်တို့ အမေတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာနေတယ်။ မြင့်ဆန်းအောင်တို့ အမေဧရာဝတီကို ချစ်ဒေါင်းကို ချစ်တယ်။ တခုသော နွေဦးမုန်တိုင်း ခူးလို့မြင့်ဆန်းအောင်တို့ အမေမျက်ရည်ပန်းတပွင့်ကြွေဖူးတယ်။ သားကြီးမြင့်ဆန်းအောင်သိမ်းမြစ်ကမ်းကသူ့ အဖေအုတ်ဂူမှာသူ့ အမေကိုယ်စားလွမ်းသူ...
>Dr Maung Ba Chit – The Bark of the Dog
> တခါ တခါတော့ ဟောင်ချင်သေးသည် ဒေါက်တာမောင်ဘချစ်ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၀ အေးချမ်းသောဆောင်းရာသီညချမ်းတွင် ကျွန်တော် မောင်ဘချစ်သည်ကံဆိုးလှစွာ ”နဂါးနီစားသောက်ဆိုင်” သို့ရောက်သွားမိရာမှ ဇာတ်လမ်း စတင်လာရသည်၊ ” ဟေ့ …...
>Letters from Michigan – 11
> မစ်ရှီဂန်မှ ပေးသောစာ (၁၁)အောင်ဝေးဇွန် ၂၈၊ ၂ဝ၁ဝ စာပေဟောပြောပွဲတခုတွင် တွေ့ရသော အောင်ဝေး (ဓာတ်ပုံ-မိုးမခ) မိတ်ဆွေကြီး ကိုဒေါင်း- ကျန်းခံ့သာလို့ မာပါစ။ “ရာစုတစ်နှစ်မှာ မျိုးဆက် လေးဆက် ရှိတယ်။ ၁၈၈၅-၁၉၈၅။...
> နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ၏ ဇွန်လတတိယပတ် မှတ်စုများ မိုးမခ (နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ကတဆင့်) ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၁၀ အနာဂတ်အတွက် “မင်းမြတ်” လမ်းဖြောင့်သွားပြီ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတွင်...
>U Aye Myint & Guiding Star reported on2child soldiers
> ဦးအေးမြင့်နဲ့ လမ်းပြကြယ်အဖွဲ့က ကလေးစစ်သား မှတ်တမ်း ၂ ခု တင်ပြထား မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃ ( http://uayemyint.blogspot.com) ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၀ ကလေးစစ်သားများပပျောက်ရေး၊ အဓမ္မလုပ်အားပေးမှုများ ဖော်ထုတ်ရေးနှင့် ဒေသခံတို့...
>Artist Myo Myint – Saya Gyan (Poet Tin Moe)
> ပန်းချီ မျိုးမြင့် – ဆရာဂျမ်း (ကဗျာဆရာကြီး တင်မိုး)ဥဒါန်း မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးDigital Art (22 cm X 28 cm)မူပိုင် – ပန်းချီမျိုးမြင့် နှင့် မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂ...
>junta’s cronies receive profits from gold mines in Chindwin river
> ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့၏ ချင်းတွင်းမြစ် ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း အကျိုးအမြတ် များပြား မိုးမခအထောက်တော်၊ ရန်ကုန်ဇွန် ၂၇၊ ၂ဝ၁ဝ နာမည်ကျော် သူဌေးကြီး ဦးတေဇ ပိုင်ဆိုင်သည့် ထူးကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ကွက်များကို ချင်းတွင်းမြစ်ရှိ ရိုးလာရွှေမှော်တွင် တွေ့နိုင်သည်။...
>Htain Linn Article – 64
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၆၄) ခေတ်စမ်းစာပေ မှ နိုင်ငံရေးထိန်လင်းဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၀ ‘ခေတ်သစ်ကဗျာအစ ခေတ်စမ်းစာပေက’ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ခေတ်စမ်းစာပေက လမ်းရိုးလမ်းဟောင်းကနေ လမ်းသစ်ကို ခွဲထွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။...
> ကာတွန်း စောငို – ၂၀၁၀ ကြတ်ပြေး ဗွေးထုတ်ယိမ်း ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၀